Eksodho 7 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jehovha anosimbisa Mozisi (1-7)
Tsvimbo yaAroni inochinja kuva nyoka huru (8-13)
Dambudziko 1: mvura inochinja kuva ropa (14-25)
7 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Ona, ndakuita kuti uve saMwari* kuna Farao, uye Aroni mukoma wako achava muprofita wako.+ 2 Unofanira kudzokorora zvese zvandichakuudza, uye Aroni mukoma wako achataura naFarao, uye acharega vaIsraeri vachibuda munyika yake. 3 Asi ini, ndicharega mwoyo waFarao uchioma,+ uye ndichaita kuti zviratidzo nezvishamiso zvangu zviwande munyika yeIjipiti.+ 4 Asi Farao haazokuteererei, uye ndicharwisa Ijipiti neruoko rwangu, ndobudisa mauto angu, vanhu vangu, ivo vaIsraeri, munyika yeIjipiti ndichishandisa mitongo mikuru.+ 5 Uye vaIjipiti vachaziva kuti ndini Jehovha+ pandichatambanudzira Ijipiti ruoko rwangu, ndobudisa vaIsraeri pakati pavo.” 6 Mozisi naAroni vakaita zvavakanga vaudzwa naJehovha; vakaita izvozvo chaizvo. 7 Mozisi akanga ava nemakore 80 uye Aroni akanga ava nemakore 83 pavakataura naFarao.+ 8 Jehovha akati kuna Mozisi naAroni: 9 “Kana Farao akati kwamuri, ‘Itai chishamiso,’ ibva wati kuna Aroni, ‘Tora tsvimbo yako uikande pasi pamberi paFarao.’ Iyo ichava nyoka huru.”+ 10 Saka Mozisi naAroni vakapinda maiva naFarao vakaita zvavakanga vaudzwa naJehovha chaizvo. Aroni akakanda tsvimbo yake pasi pamberi paFarao nevashandi vake, ikava nyoka huru. 11 Zvisinei, Farao akashevedzawo vanhu vakachenjera nen’anga, uye vapristi vaiita zvemashiripiti veIjipiti+ vakaitawo saizvozvo nemashiripiti avo.+ 12 Mumwe nemumwe wavo akakanda tsvimbo yake pasi, dzikava nyoka huru; asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. 13 Kunyange zvakadaro Farao akaomesa mwoyo,+ uye haana kuvateerera, sezvakanga zvataurwa naJehovha. 14 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Mwoyo waFarao wakaoma.+ Aramba kuti vanhu vaende. 15 Enda kuna Farao mangwanani. Iye achange achienda kurwizi. Unofanira kumira pamhenderekedzo yeRwizi rwaNire kuti usangane naye; uye uende uine tsvimbo muruoko rwako, iya yakachinja kuva nyoka.+ 16 Uye unofanira kuti kwaari, ‘Jehovha, Mwari wevaHebheru andituma kwauri,+ achiti: “Rega vanhu vangu vaende kurenje kuti vanondishumira,” asi hausi kuda kuteerera. 17 Jehovha ari kuti: “Izvi ndizvo zvichaita kuti uzive kuti ndini Jehovha.+ Ndiri kurova mvura iri muRwizi rwaNire netsvimbo iri muruoko rwangu, uye ichachinja kuva ropa. 18 Hove dziri muna Nire dzichafa, uye Nire achanhuhwa, uye vaIjipiti vachatadza kunwa mvura yemuna Nire.”’” 19 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: “Udza Aroni kuti, ‘Tora tsvimbo yako utambanudzire ruoko rwako pamusoro pemvura yeIjipiti,+ iri munzizi, iri mumigero,* iri munzvimbo dzine machakwi,+ uye iri mumadhamu, kuti ive ropa.’ Munyika yese yeIjipiti muchava neropa, kunyange mumidziyo yese yakavezwa nemuti uye yematombo.” 20 Mozisi naAroni vakabva vangoita zvavakanga varayirwa naJehovha. Akasimudza tsvimbo akarova mvura yakanga iri muRwizi rwaNire Farao nevashandi vake vakatarisa, mvura yese yaiva murwizi ikachinja kuva ropa.+ 21 Hove dzaiva murwizi rwacho dzakafa,+ rwizi rukatanga kunhuhwa, uye vaIjipiti havana kukwanisa kunwa mvura yemuna Nire,+ uye nyika yese yeIjipiti rakanga rangova ropa. 22 Kunyange zvakadaro, vapristi vaiita zvemashiripiti veIjipiti vakaitawo saizvozvo nemashiripiti avo,+ zvekuti mwoyo waFarao wakaramba wakaoma, uye haana kuvateerera, sezvakanga zvataurwa naJehovha.+ 23 Farao akabva adzokera kumba kwake, uye haana zvakare kumboita basa nazvo. 24 Saka vaIjipiti vese vaichera kumativi ese aNire kuti vawane mvura yekunwa, nekuti vakanga vasingagoni kunwa mvura yemuna Nire. 25 Kwakapfuura mazuva manomwe kubvira pakarohwa Nire naJehovha.
^ ChiHeb., “ndakuita kuti uve Mwari.”
^ Kureva, migero inobva muna Nire.